2 Samoela 16 - Ny Baiboly
2 Samoela toko 16
Ny namadihan'i Sibà an'i Mifiboseta - Ny nanompan'i Semeia an'i Davida - Ny nidiran'i Absaloma tao Jerosalema.
1Vao tafahoatra kely ny tampony Davida dia inty Sibà mpanompon'i Mifiboseta tonga nitsena azy, nitondra ampondra roa voaisy lasely, ka nibaby mofo roan-jato, ampembam-boaloboka maina zato, voankazo masaka zato, ary divay iray siny hoditra. 2Dia hoy Davida tamin'i Sibà: Hataonao inona avy ireo? Ka hoy ny navalin'i Sibà: Ny ampondra ho an'ny ankohonan'ny mpanjaka, hitaingenany, ny mofo amam-boankazo hihinanan'ny zatovo, ary ny divay hisotroan'izay reraka any an'efitra. 3Dia hoy ny mpanjaka: Fa aiza ny zanaky ny tomponao? Ary hoy ny navalin'i Sibà tamin'ny mpanjaka: Indro fa nijanona any Jerosalema izy, fa hoy izy: Hampodin'ny taranak'Israely amiko izao ny fanjakan'ikaky. 4Ka hoy ny mpanjaka tamin'i Sibà: Indro fa anao avokoa izay rehetra nananan'i Mifiboseta. Dia hoy Sibà: Mihohoka amin'ny faladianao aho, ka aoka hahita fitia eo imasonao aho, ry mpanjaka tompoko ô!
5Nony tonga tao Bahorima ny mpanjaka, indro nisy lehilahy anankiray, atao hoe Semeia zanak'i Gerà, iray fianakaviana tamin'ny ankohonan'i Saola, nivoaka avy tao, dia nandroso izy sady nanozona, 6ary nitora-bato an'i Davida mbamin'ny mpanompon'i Davida mpanjaka rehetra; ary ny vahoaka mbamin'ny lehilahy mahery kosa tamin'izay dia teo ankavanany sy ankaviany. 7Izao no tenin'i Semeia nanozona azy: Mandehana any, mandehana any, ry ilay mpandatsa-drà, ry olon'i Beliala! 8Indro natsingerin'ny Tompo aminao ny ran'ireo tamingan'i Saola rehetra izay nosoloinao toerana mba ho mpanjaka; natolony ho eo an-tànan'i Absaloma zanakao ny fanjakana ka indro fa idiran-doza hianao izao, satria lehilahy mpandatsa-drà hianao. 9Ka hoy Abisaia zanak'i Sarvià tamin'ny mpanjaka: Ahoana no anozoan'ilay alika maty io ny mpanjaka tompoko? Avelao kely aho handeha hanapaka ny lohan'io! 10Fa hoy ny navalin'ny mpanjaka: Tsy manan-draharaha aminareo aho, ry zanak'i Sarvià! Aoka hanozona izy, satria fa raha Iaveh no nanao taminy hoe: Ozony Davida: zovy moa no hanao aminy hoe: Ahoana no anaovanao izany? 11Ary hoy Davida tamin'i Abisaia sy ny mpanompony rehetra: He, ny zanako naloaky ny kiboko aza ity mitady ny aiko; ka mainka fa io zana-Benjamina io! Avelao izy hanozona, fa didin'ny Tompo taminy izany. 12Angamba hijery ny fahoriako Iaveh ka soa no hataon'ny Tompo amiko ho valin'izao ozona androany izao. 13Ary Davida sy ny olony nanohy ny diany, fa Semeia kosa nandeha tamin'ny kisolasolan'ny tendrombohitra akaikin'i Davida sady tsy nitsahatra ny nanozona azy, sy nitora-bato ary namafy vovoka. 14Sasatra ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra nanaraka azy, no tonga tao... ary niala sasatra teo izy.
15Niditra tao Jerosalema Absaloma sy ny vahoaka rehetra, ny lehilahy amin'Israely, ary niaraka taminy koa Akitofela. 16Nony tonga nanatona an'i Absaloma Kosaia, ilay Arakita, dia hoy Kosaia tamin'i Absaloma nanao hoe: Ho ela velona anie ny mpanjaka! 17Fa hoy Absaloma tamin'i Kosaia: Izao ve no firaiketanao amin'ny sakaizanao? Nahoana no tsy mba nandeha niaraka tamin'ny sakaizanao hianao? 18Ary hoy Kosaia tamin'i Absaloma: Tsia fa ilay nofidin'ny Tompo sy ny vahoaka rehetra, mbamin'ny lehilahy rehetra amin'Israely no tiako hombana, ka dia ny hitoetra aminy no tiako. 19Sady iza moa no hotompoiko? Moa tsy ny zanany va? Toy ny efa nanompoako an-drainao ihany no hanompoako anao koa.
20Ka hoy Absaloma tamin'i Akitofela: Manaova fivoriana fakan-kevitra hianareo, ny amin'izay tokony hataontsika. 21Dia hoy Akitofela tamin'i Absaloma: Mandehana amin'ny vaditsindrano navelan-drainao hiandry trano, dia ho hitan'Israely rehetra amin'izany fa manao izay hahatafintohina an-drainao aminao hianao, ka dia hihamahery ny tànan'izay rehetra momba anao. 22Dia nanangan-day teo ambonin'ny tafon-trano Absaloma ka nandeha tamin'ny vaditsindranon-drainy, teo imason'Israely rehetra, Absaloma. 23Toy ny teny avy amin'Andriamanitra ho an'izay manontany azy, ny hevitra nomen'i Akitofela tamin'izay, ary ny hevitra nomeny rehetra na tamin'i Davida, na tamin'i Absaloma dia toy izany koa. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1093 seconds